Waa maxay isbeddelka cimilada? | Saadaasha Shabakadda
Waa maxay isbeddelka cimilada?
Xaqiiqdii waxaad maqashay marar badan sanadihii la soo dhaafay isbedelka cimilada iyo cawaaqibka ay ku yeelan karto muddada dhexe iyo tan fog. Laakiin, Runtii ma ogtahay waxa ereyga laftiisa loola jeedo iyo haddii uu yahay mid culus sida ay sheegaan?
Xaqiiqdu waxay tahay in isbeddelada cimilada had iyo jeer ay dhacaan, maaddaama aysan ka badneyn wax ka beddelka muddada-dheer ee cimilada sababo la xiriira xad-dhaaf ah kululaynta dhulka dushiisa oo dhan. Xaaladaha dabiiciga ah awgood waa geedi socod caadi ah, oo caan ka ah adduunka, laakiin bini'aadamka tobanaankii sano ee la soo dhaafay ayaa uga sii daray iyada oo loo marayo waxa loogu yeero saameynta aqalka dhirta lagu koriyo. Sidaas darteed, Waa maxay isbeddelka cimilada?
1 Waa maxay isbeddelka cimilada?
1.1 Sababaha ugu waaweyn
2 Sababaha dabiiciga ah
3 Sababaha Antropogenic
4 Cawaaqibka isbeddelka cimilada hadda jirta
4.1 Saamaynta noolaha
4.2 Cawaaqibta Dunida
Saadaasha hawadu waa qayb ballaadhan oo cilmi-baaris ah, tan iyo cimiladu weligeed ma taagna, oo tanuna waa wax aynu nafteena ku ogaan karno gudbinta xilliyada, iyo xitaa maalmaha. Waxaa jira arrimo badan oo ku lug leh: joogga, masaafada u jirta bartamaha, qulqulka badda, iyo kuwo kale. Markii aan ka hadlayno 'isbeddelka cimilada' waxaan tixraacnaa isbeddelka adduunka ee muddada-dheer ee cimilada dhulka. Ereygan waxaa soo saaray 1988 koox saynisyahano ah oo soo gabagabeeyay in sii deynta qiiqa kaarboonka ay dardar galineyso isbedelka cimilada dabiiciga ah.
Khubaradan ayaa soo saaray warbixino taxane ah oo intooda badan dawladaha waaweyn waa inuu adeeco haddayna rabin inay waxyeellada halaagga ahi sii fogaato.
Sababaha ugu waaweyn
Sababaha isbedelka cimilada ayaa noqon kara dabiiciga ah o anthropogenic, taasi waa in la yiraahdo, ficil ahaan aadanaha.
Sababaha dabiiciga ah
Sababaha dabiiciga ah ee ugu waaweyn waxaan ka helnaa waxyaabaha soo socda:
Dhulka magnetka dhulka
Kala duwanaanta qoraxda
Saamaynta meteor ama asteroid
Dhammaantood waxay in muddo ah sababeen isbeddel cimilo weyn. Tusaale ahaan, 65 milyan oo sano ka hor cirbixiyeen ku dhuftay Dhulka oo aakhirkii sababay Da 'baraf Da' ah, tirtiraya dhowrka dinosaur ee hadhay nolosha musiibada kadib. Waqtiyadii ugu dambeeyay, aragtida ayaa si isa soo taraysa loo aqbalay in 12.800 sano ka hor meteorite ku dhuftay Mexico ay sababtay isla wax.
Suurtagal ma aheyn in la hadlo ninkaas wuxuu sii xumeyn karaa isbedelka cimilada ilaa el sapiens faaftay waxay bilaabi doontaa inay xaalufiso keymaha si looga dhigo dhul beereed. Waa run in mudadaas (qiyaastii 10 kun oo sano ka hor) insaanka aadan ka badneyn shan milyan, inkasta oo ay tahay shay muhiim ah, saameynta ay ku yeelatay dhulka aad ayey uga yaraayeen maanta.
Waxaan hadda qarka u saaran nahay inaan gaarno 7 bilyan oo qof. Iyo waxa aan ku sameyneyno meeraha ayaa bilaabaya inay waxyeello u geystaan, tan iyo markii Kacaankii Warshadaha waxaan kordhinay qiiqa gaaska sida kaarboon laba ogsaydhka ama methane, taas oo gacan ka geysaneysa sii xumeynta saameynta aqalka dhirta lagu koriyo. Laakiin, maxay ka kooban tahay?
Markii laga hadlayo nidaamkan, tixraac ayaa loo sameynayaa haynta kuleylka qorraxda ee jawiga lakab gaasas ah (sida CO2, methane, ama nitrous oxide) oo laga helo. Waa muhiim in la ogaado in saamayntaan la'aanteed aysan noolaan lahayn nolosha sida aan ku naqaano, maxaa yeelay meeraha ayaa si fudud u qabownaan lahaa. Dabeecadda ayaa mas'uul ka ah dheellitirka qiiqa, laakiin waan ku adkeyney iyaga: waxaan kordhinay qiiqa 30% ilaa qarnigii tagay.
Maanta ficil ahaan dhammaan saynisyahannadu waxay isku raaceen in qaabkeenna soo-saarista tamarta iyo isticmaalkeedu uu beddelayo cimilada, taas oo iyaduna sababi doonta saamayn culus ku yeelata dhulka iyo, sidaa darteed, qaabkeena nololeed.
Sida lagu sheegay warbixinnadii ugu dambeeyay ee ka imanaya Golaha Dawliga ah ee Isbedelka Cimilada (IPCC), cawaaqib xumada ka dhalan karta isbeddelka cimilada ayaa durba bilaabay in laga dareemo dunida oo dhan. Heerkulku wuxuu kordhay 0,6ºC qarnigii 10aad, heerka badda wuxuu sare u kacay 12 ilaa 0.4 sentimitir. Saadaashu haba yaraatee ma ahan mid rajo leh: heerkulka u dhexeeya 4 iyo 25 darajo oo ka sarreeya ayaa la filayaa dhammaan qarniga 82aad iyo kor u kaca heerka badda ee u dhexeeya XNUMX iyo XNUMX sintimitir.
Cawaaqibka isbeddelka cimilada hadda jirta
Waan ognahay in heer kulku uu sii kordhayo, laakiin Maxaa inala gudboon Haysashada cimilo aad u wanaagsan waxay dad badan u noqon kartaa war wanaagsan, laakiin runtu waxay tahay inaan isku diyaarinno nafteenna cawaaqibyada beddeli kara adduunkeena weligeed.
Dhimasho, cudurro, xasaasiyad, nafaqo-darro, ... marka la soo koobo, wax kasta oo aynaan jeclayn way sii kordhayaan heer-kul sarreeya awgood. Intaas waxaa sii dheer, cuduro cusub ayaa soo bixi doona, iyo kuwa sida caadiga ah isugu urursanaa gobollada kulaylaha, horay u sii socon doona.
Dhirta iyo xayawaanka sidoo kale waa la saameyn doonaa: dhacdooyinka gu'ga sida ubax ama ukun dhigid ayaa goor hore imaan doonta. Noocyada qaar ayaa joojin doona tahriibka, kuwa kalena taa badalkeeda waxaa lagu qasbi doonaa inay sidaas sameeyaan haddii ay doonayaan inay noolaadaan.
Marka la kordhiyo qiiqa CO2, baddu waxay kaloo soo nuugi doontaa wax badan oo gaaskan ah sidaa darteed acid ayey soo saari doontaa. Sidaa darteed, xayawaanno badan, sida dhuxul ama moosal, way halligmi doonaan. Meelaha sare, mugga algae iyo plankton ayaa isbadalaya.
Jasiiradaha iyo jihooyinka hooseeya quusin doonta heerarka badda oo sare u kacaya; Meelo badanna daadadku waxay ka mid noqon doonaan dhibaatooyinka welwelka leh ee ay la tacaalayaan.
Dhinaca kale, abaartu waa sii xoogeysan doontaa gobolladaas oo roobabku ku yar yihiin laftiisa.
Sidaad aragteenba, isbeddelka cimilada ayaa ah wax aad u culus oo ay tahay in qof kastaa ka feejignaado, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha quwadaha waaweyn ee adduunka. Muddada dhexe, meeraha waxaa ku dhici kara cawaaqib xumo isdaba joog ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Waa maxay isbeddelka cimilada?
Alejandra Valois Almazán dijo
WAAN U ARKAA AABE IYO XIISO BADAN SIDEE AYAAN Uga HORTAGI KARNAA ISBADALKA CIMILADA
Jawaab Alejandra Valois Almazan
Isbedelada cimiladu waxay ahaayeen weligoodna way jiri doonaan. Si kastaba ha noqotee, maanta, bini-aadamku wuxuu sameynayaa wax badan si loo dedejiyo oo looga sii daro.
Waxaa jira waxyaabo badan oo la sameyn karo si looga fogaado aafada:
-Care oo ilaali deegaanka
-Si fiican u isticmaal biyaha iyo dhamaan kheyraadka dabiiciga ah ee aan haysano
-U isticmaal mar kasta oo aan kari karno, ama dib-u-warshadayno
-Badeecadaha laga iibsado aaggeenna (maalin kasta xarumaha waaweyn ee wax laga iibsado waxaa ka buuxa alaab laga keenay dalal kale; taas oo ah, waxay ku yimaadeen maraakiib iyo / ama diyaarado, kuwaasoo soo saaraya gaasaska jawiga wasakheeya)
Waxaan u arkaa maqaalkani mid waxtar badan laakiin ma sheegi kartaa waa maxay ilahaaga macluumaadka? Shaki iigama jiro waxaad sheegeyso (runti, waan la wadaagayaa) laakiin, dunida sayniska, waxaa fiican inaad taageero ka hesho suugaanta sayniska. Sidan oo kale, waxaad sidoo kale ka caawineysaa dad badan oo doonaya inay wax ka ogaadaan kuwa runta yaqaan (saynisyahannada) oo aan looga tagin keligood waxay maqlaan ama akhriyaan (taas oo, marar badan, waxay noqon kartaa fikrado aan sal lahayn).
Jawaab MJ Norambuena